fanaanka caanka ah Chris Brown wuxuu ugu yeeray Eudoxie Yao duugis - TELES RELAY
Eudoxie Yao ayaa shaaca ka qaaday sanadkii 2012 in ay weydiisatay Chris Brown, caanka Mareykanka ah ee caanka ah, in lagu duugo qol hoteel ku yaal Mareykanka. Muddo dheer, isticmaaleyaasha Internetku waxay rumeysnaayeen abuuritaanka bobaraba si ay naftooda ugu dhiibtaan aragtiyo websaydh ah oo ay ku ifkaagaan.
Siddeed sano kadib dhacdadan, qofka hadda isu yeero Doxy Rover ayaa ku soo noqotay mowduucaas oo cinwaan uga dhigay cinwaannada. Ka soo bandhigay barnaamijka TV-ga ee RTI Talaadada, Juun 23, Hottentote Venus of Babi wuxuu xaqiijinayaa inuu u yeeray Chris Brown: Waxaan u aaday Mareykanka maxaa yeelay wuxuu u baahnaa duugis, aniga ayaana ahaa qofka sidaas sameysay. Ogow inaan ahay xirfadle xirfad yaqaan ah, oo aan xitaa haysto dibloomahayga ah CAP (Shahaadada Aqoonsi ee Xirfadle.) Marka aan duugista, runtii aad bay ii raaxeysataa, maxaa yeelay naftayda waan garanayaa. Kahor intaadan ku dhajin warbaahinta bulshada, waxay ahayd shaqadii qurxinta ee aan qabtay. Marka waxaan imid hoolka huteelka Chris Brown ee kulanka duugista… ”
Suxufiyaduna inay weydiiso Eudoxie muxuu ahaa jawaab celintiisii ​​aragtida Chris Brown, xiddigga weyn ee Mareykanka. Doxy Rover wuxuu raaciyay:
- Waan xasilloonaa markii aan arkay. Laakiin waxaan si farxad leh ugu qayliyay markaan arkay Didier Drogba!
Sidaa darteed Eudoxie waxay noo sheegaysaa in maanta oo ay taariikh ku yeelatay caanka Mareykanka, Didier Drogba uu joogo, oo uu ahaa kii ku guuleystey kicinta hamigiisa. Waxay kaloo sheeganeysaa in P-Square duo, Fannaaniin reer Nigeria ah, ay goob joog ahaayeen. Markii la weydiiyay sida duugista Chris Brown uu u socday, Doxy Rover wuxuu ku jawaabay:
- Ugu dambayntii may duugi karin. Rihanna halkaas ayey joogtay, albaabkana waan xidhnay markii aan la kulanay. Duugista waxaan siiyay shaqaalihiisa…
Eudoxie ayaa sidoo kale tilmaamaysa in qiimaha duugistiisa loogu duugay $ 100 hal qof. Kaliya waxay ahayd qiimaha adeeggiisii ​​caadiga ahaa ee Abidjan oo qiimahiisu ahaa 50.000 CFA franc.
Sidaa darteed waxay awood u yeelatay inay daryeesho shaqaalaha Chris Brown, marka laga reebo raxan caan ah laftiisa. Hagaag, sidee Rihana oo ahayd gabadha heesaha u ahayd waqtigaas albaabka agtiisa ku dhawaaqikartaa qaababka maroodiga masseuse ee Baab ka? Laga yaabee inay si dhaqso leh u noqon lahayd Chris Brown haddii Eudoxie loo oggolaaday inay shaqadeeda qabato? Marka waa inaad ilaashataa xirfadahaaga, miyaydaan ahayn?
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u muuqday: https://afriqueshowbiz.com/eudoxie-yao-chris-brown-ma-fait-appel-pour-un-massage/
Isku dhacyo rabshado wata oo udhaxeeya xubnaha Santa Rosa de Lima cartel iyo ciidamada amaanka Mexico